ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း(၆) – အပြာစာအုပ်များ
ဈန်ရ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားပြီး သူမ နှုတ်ခမ်းတွေ ကို နမ်းစုတ် သည် ..။အလိုလို သူ့ကိုယ်တခုလုံး က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ခြေထောက် နဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားမှာ ဆိုတော့ သူ့ဒူးတွေ နဲ့လဲ တွန်းခွဲလိုက်ရော သူမ ပေါင်တန်တွေ ကို ဘေးတဖက်တချက်ကို ကားဖြဲပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွား သည် ..။ ဈန်ရ ကို ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် လဲ တုံ့ပြန်ပြီး စုတ်နမ်းမိ သည် ..။ ဈန်ရ လက်တွေ က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ ဖွံ့ထွားသော ရင်စိုင်တွေကို ဆုတ်နယ်နေ သည် . .။ဟိုထိုးမိ ဒီထိုးမိ ဖြစ်နေတဲ့ ဈန်ရ လိင်တန် ပူနွေးနွေးကြီး ကို အသဲယားနေမိတုံးဘဲ
သူ့ကောင်ကြီး ရဲ့ ထိပ်ဖူးကြီး က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကြားတဲ့တဲ့ အပေါက်ကို လာတေ့လိုက် သည်။
ဈန်ရ သည် လိင်တန်ကို ညာလက်နဲ့ အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး အန်တီလေး ရဲ့ အကွဲကြောင်းကို သုံးလေးခါလောက် အပေါ်အောက် ပွတ်တိုက်လိုက်ပြီး ..ထိုးသွင်းလိုက် သည် ..။ အရေတွေက စိုစိုရွှဲနေလို့လားမသိ ..။ သူ့ထိပ်ခေါင်းဒစ်ပိုင်း သည် တင်းကျပ်စွာနဲ့ ၀င်သွား သည် ..။
“ အို..အင်းအင်း…..ဈန်..ဈန်..ဖြေးဖြေး…နာတယ် . ..”
ဈန်ရ လဲ ဆက်မထိုးသွင်းသေးဘဲ အန်တီလေး ရဲ့ ရင်သားထိပ်ဖူး နီနီလေးတွေ ကို ဘယ်ပြီး ညာ စို့ပေးနေ သည် ..။ထိပ်ပိုင်းဝင်နေသော သူ့လိင်တန် ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖိဖိသွင်းလိုက် လျော့လိုက် လုပ်တော့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တအင်းအင်း နဲ့ ဈန်ရ ကျောပြင်ကို ဆွဲဖက်ထားနေ သည် ..။ဈန်ရ ညာဘက်လက် က သူမ တင်ပါးအိအိကြီး ကို ဆွဲကိုင်ကာ ခါးကိုကော့ပြီး ထပ်ထိုးပြန် သည် ..။အာ …အင့်..ဈန် . . ဈန် . .အန်တီလေး ဟာ ကွဲသွားအုံးမယ်…….။
“ အန်တီလေး ရယ် ..အရမ်း..အရမ်း …ချစ်တယ် …”
“အန်တီလေး လဲ ဈန့်ကို တအား ချစ်မိနေပြီ ..ချစ်မိနေပြီ ..”
ဈန်ရ သည် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ပုခုံးသားတွေကို နမ်းနေရင်း ..လက်ကလဲ ရင်သားတွေကို ကိုင်တွယ်နေရင်း ..သူ့လိင်တန် ကို အင်္ဂါစပ် ထဲကို ထိုးသွင်းနေ သည် ..။ ထိုးသွင်းလိုက် ..ပြန်ဆုတ်လိုက် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် မှာ သူလုပ်သမျှ ရင်တဖိုဖို အသဲတအေးအေး နဲ့ ခံနေရင်း ..တထစ်သွင်း ..နှစ်ထစ်သွင်း နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အကုန်လုံး သွင်းမိ သွားရတော့ ဈန်ရ လိင်တန်တချောင်းလုံး သူမကိုယ်ထဲ ရောက်ရှိနေတာကို အံ့သြကြည်နူးခြင်းတွေ ဖြစ်မိနေရပြီး ဈန်ရလည်ဂုတ်ကို အတင်းဆွဲကာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံခဲစုတ်နေမိ သည်။
ဈန်ရရဲ့ လိင်တန်အရင်း က အမွှေးလိန်ကောက်ကောက်တွေ က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထိပ်ပိုင်းက အမွှေးစုစုတွေ နဲ့ ရောယှက်ထိကပ်နေတဲ့အထိ နှစ်ကိုယ့်တကိုယ် ဖြစ်နေ သည် ..။ ဈန်၇လဲ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ နှုတ် ခမ်းတွေကို နမ်းနေရင်း..သူ့လိင်တန်ကို တဖြေးဖြေးဆွဲနုတ် သည် ..။ ထိုးသွင်းတဲ့ခါရော နုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အခါရော သူ့လိင်တန် ဟာ သူမ အဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်တိုက်တာကြောင့် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် မှာ တကိုယ်လုံး တုန်ခါပြီး ..တအင်အင် နဲ့ အရသာထူးလွန်းနေရ သည်။
ဈန်ရ သည် စတုံးက ဖြေးဖြေး စပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်လဲ ခံနိုင်လာတာလဲ သိရော အသွင်းအထုတ်တွေ မြန်ဆန်လာ သည် ..။ ထိုးထည့်တာ မဟုတ်တော့ဘဲ ဆောင့်ပေးတာတွေ ဖြစ်လာ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ကိုယ်တိုင် က ဖြေးဖြေး လုပ်ပေးတာကို အားမရတော့..။ အရှိန်တက်ခါ အရသာကလဲ ကောင်းသထက် ကောင်းလာ သည် ..။ မြန်မြန် လုပ်စေချင်လာ သည် ..။ ဈန်ရကလဲ မြန်မြန် လုပ်ပေးလာသည် ။
“ မြန်မြန် …မြန်မြန် ..ဈန်ရ …”
ဈန်ရလဲ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ပြီး မြန်မြန်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးလာ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကြိုက် သည် ..။ ဈန်ရ ကို တအားဆွဲဖက် သည် ..။ ဆက်တိုက် ဆောင့်ချက်တွေ မြန်သထက် မြန်လာပြီး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် တကိုယ်လုံး တုန်ကျင်ကာ အကောင်းဆုံး ပြီးခြင်း ကို ရောက်ရှိသွားရလေ သည် ..။ ဈန်ရ လဲ ဆောင့်နေဆဲ ..။ ဈန်ရရယ်..ချစ်လဲ ချစ်နိုင် ..ချစ်လဲ ချစ်တတ်လိုက်တာ ..အားကလဲသန်လိုက်တာ ..မမ…မမလေ စွဲသွားရပြီ ..။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ တူလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း နဲ့ ညိသွား
တာ ကို လူအသိ မခံချင်ဘူး ..။ ဈန်ရ ကို ချစ်တာကတော့ အရမ်း ..။ ဈန်ရ ဖန်းကနဲ ဖန်းကနဲ ဆောင့်ထည့်ရင်း..သုတ်တွေ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲ တထုတ်ထုတ် ပန်းထည့်ကာ ပြီးခြင်း ကို တက်လှမ်းသွားရ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် ချွေးများသီးနေသော ဈန်ရ မျက်နှာလေး ကို အနီးကပ် ငေးကြည့်နေ သည် ..။အရမ်း မင်းလေးကို ချစ်တာဘဲကွာ ..။အင်း..အကိုကြီး ဦးထွန်းချုပ် ..တူကြီးသီဟ..တူမ အမရာ တို့ ဒီကိစ္စ ဘယ်လိုမှ သိလို့ မဖြစ်ဘူး ..။ အိုလေ ..သူ့ကိုချစ်တာ အရမ်း..အရမ်းဘဲ ..။
“ ဟင်..အန်တီလေး …”
“အရမ်း..အရမ်း .. အန်တီလေး ရော ..ချစ်လား ..”
“ အင်း..အရမ်းဘဲ ..သူ့ကို အန်တီလေး ..အရမ်းချစ်တယ် …”
အနမ်းတွေ ထပ်ပြီး ပေါက်ဖွားရပြန် သည် ..။ ရပ်လို့မရတဲ့ အနမ်းများ ..။ အနမ်းသံသရာ လို့ ခေါ်ရမလား ..။မပြီးဆုံးချင်တဲ့ အနမ်းများ ..။တညလုံး ..ဈန် နဲ့ အချစ်လွန်ပွဲတွေ နွှဲကြ သည် .. ။နောက်တနေ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် လမ်း မလျောက်နိုင် ..။ကွတတ ဖြစ်နေ သည်။န့လုံး အိပ်ရာထဲ လှဲနေ သည် ..။ အင်္ဂါစပ် က နာကျင် ကျိန်းစပ်နေ သည် ..။သူ..သူ ဆုတ်နယ်ချင်တိုင်း ဆုတ်နယ်ထားတဲ့ ရင်စိုင်တွေ..တင်ပါးတွေ နာကျင်နေ ဆဲ ..။ သူ တအားစို့သွားတဲ့ နို့သီးဖုလေးတွေ ယောင်နေသလားမသိဘူး ..။ဟင်း ..လူဆိုးလေး ..။သူ မနက်စောစေ ထပြန်သွား သည် .. ။ သူ့ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘို့ သေသေချာချာ ပိတ်ရသေး သည်။
အမရာ သည် မွေးနေ့ ညက ဈန်ရ ကို နောက်ပိုင်း ရှာလို့မရတော့ ဒေါ်မိကို မေးတော့လဲ ဒေါ်မိက မသိဘူးတဲ့..။ ဈန်ရ ပွဲသိမ်းချိန် မရှိ ..။ ကြည့်ရတာ ကိုကြီးသီဟဘဲ တခုခု ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ တူတယ် ..။ ဈန်ရမောင်သည် ဘာလို့များ သူတို့အိမ်မှာ ခိုင်းဖတ် လာလုပ်နေသလဲ မသိဘူး ..။ သူ့မိဘတွေ သည် ဆင်းဆင်းရဲရဲတွေလဲ မဟုတ် ..။ ဈန်ရ သည် သူ့ကို ချစ်နေလို့များ ..သူ့ကို တွေ့ချင်နေလို့များ..သူတို့အိမ် မှာ လာပြီးကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသလား ..။ အမရာ သူ့အကြောင်းတွေးပြီး ရင်တွေ ခုံနေ သည် ..။ သူ ချစ်နေတာသေချာပါတယ်။
အသဲပုံလော့ကက် ကို မချစ်ဘဲ ပေးမလား ..။ ကိုကြီး ပြောတာကတော့ သူ့မှာ ရီးစားမရှိဘူး..တဲ့ ..။ သူ့ကို ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကတော့ အရမ်းများသတဲ့ ..။ သူက ပြန်မကြိုက်တာ..တဲ့ ..။ ငါ့ကိုဘဲ စွဲလန်းနေလို့များလား ..။ ငါကကော ..။ငါ က သူ့ကို အရမ်းသဘောကျတာ..။ ငါသိတယ် ..။ သူ့ကို ငါ သိပ်ချစ်နေတယ် ..။ အရမ်းအရမ်းချစ်တယ် ..။အမရာ ညက သူ့အကြောင်းတွေးပြီး အိပ်မပျော် ..။ တညလုံးဘဲ လူးလိုက် လှိမ့်လိုက် နဲ့ ..။ သူ့ကြောင့်..။ငုတ်တုတ်ထထိုင် နေမိ တယ် ..။သူပေးတဲ့ လော့ကက်လေး ကို ကိုင်ပြီး..တွေးနေတယ် ..။ မြင်ယောင်နေတယ်။
ဈန်ရ ကားမောင်းရင်း..အန်တီလေး နဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ ကို အံ့သြနေဆဲ ဖြစ်နေသည် ..။ အိပ်မက်မက်နေသလိုဘဲ ..။ အင်မတန်မှ မာနကြီးသော ..အင်မတန်မှ ချောလှသော သူဌေးမ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် သူ့ကို အရမ်းအရမ်းချစ်သည် ..တဲ့ ..။ နောက်ဆံး မနက်လင်းအားကြီး..သူ ထပြန်ခါနီး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် သူ့လိင်တန် ကိုစုတ်ပေးပြီး ချစ်သက်သေပြပြန် သည် ..။ “ ဈန် နဲ့ ထပ်တွေ့ကြအုံးမယ် နော် ..” လို့ ခွဲခွာခါနီး မှာသေး သည် ..။ ဖုန်းမြည်လာ သည် ..။သီဟ ..။
“ဟေး..ဈန်ရ..ဘယ်လိုလဲ..ည က အိုကေလား..”
ဈန်ရ သီဟ သိများသိသွားပြီလား..ဆိုပြီး လန့်သွား သည် ..။“ ဘာကိုမေးတာလဲ..သီဟ…” သူ့အသံတွေ တုန်နေသလား မသိဘူး ..။
“အော် ..အန်တီလေး ခြံထဲ လူတွေဘာတွေ ၀င်သေးလား ..လို့..”
“ မ၀င်ပါဘူး ..အေးအေးဆေးဆေး ပါဘဲ..”
“ငါ အခု ..ရိုစီကောင်းဘော် ကို စောင့်နေတာ..”
“ ငါ အိမ်ပြန်ပြီး ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် …”
“ကောင်းပြီ..ငါ ပြန်ဖုန်းခေါ်မယ် လေ ..”
ပဲခူးက သူဌေးသမီး ရိုစီကောင်းဘော် နဲ့ ရန်ကုန်က သူဌေးသား သီဟထွန်းချုပ်တို့ တွေ့ကြပြီ ..။ တနေကုန်လျောက်လည် စားသောက် ကြပြီး ညနေ ရောက်လို့ လမ်းခွဲကြပြီး သီဟ သည် ဈန်ရ နဲ့တွေ့သောအခါ သူ ရိုစီကောင်းဘော် ကို စိတ်ထဲမှာ သိပ်မကြိုက်သလိုဘဲ ..ပုံမှန်ပြန်နေတော့မည် လို့ ပြော သည် ..။ သူ့အဖေနဲ့ စီးပွားဖက်စပ် လုပ်ထားတာကြောင့် ..တနေ့ အဆင်မပြေဘဲ ခွာပြဲ ရင် မျက်နှာပျက်ကြရနိုင်တယ် ..လို့ ပြောလေ သည် ..။
“ ဈန်ရ..ဒီညလဲ မင်း အန်တီလေး အိမ်မှာ သွားအိပ်ပေးလိုက်အုံးနော် ..သူ့ခြံမှာ ကင်မရာ တတ်ပေးရအုံးမယ် ..ခုထိ မတတ်ဖြစ်သေးဘူး ..ခြံစောင့်ကောင်းကောင်း မရသေးလို့ မင်းဘဲ စောင့်ပေးလိုက်ပါအုံးကွာ..မိန်းမသားတွေ ချည်း ဖြစ်နေလို့ ..”
“မင်းကော လာမအိပ်ဘူးလား ..”
“ ငါ က တခု လုပ်စရာ ရှိနေသေးလို့ ..”
သီဟ နဲ့ ဈန်ရ အသစ်ဖွင့်တဲ့ အနှိ်ပ်ခန်းတခု ကို သီဟ သွားလိုတာကြောင့် ရောက်သွား သည် ..။ ဈန်ရက အနှိပ်မခံချင် ..။ သီဟ အဖေါ်ရအောင်သာ လိုက်သွားတာ ..။ သီဟ ကို နှိပ်ပေးတဲ့ ကောင်မလေး က တော်တော်လေး လန်း သည် ..။ သီဟ သဘောကျပြီး ဒီကောင်မလေး နဲ့ ဆက်နေချင်သေးလို့ ဆိုပြီး နောက်ထပ်တနာရီ ထပ်နေ သည် ..။ ကောင်မလေး နှိပ်ရတာ လက်တွေ ညောင်းနေပြီ ဆိုပြီး မနှိပ်ခိုင်းတော့ ..။ ကောင်မလေး က..“ ဒါဆိုလဲ အကိုက ညီမ ကို နှိပ်ပေးမလား ..” လို့ ပြုံးစိစိ နဲက မေးတော့ သီဟ အရမ်း သဘောကျ
အကြိုက်တွေ့သွားတာပေါ့ ..။ ကောင်မလေး က မှောက်ရက်လေး လှဲလျောင်းပေးနေပြီ ..။ သီဟ ကောင်မလေးရဲ့ ခြေသလုံးဖွေးဖွေးလေးတွေ ကို စပြီး နှိပ်ပေး သည် ..။
“ အင်း….အကို က နှိပ်တတ်သားဘဲ ..လက်က တအား သန်တယ် . .”
ကောင်မလေး ရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို သူနှိပ်တော့ သီဟ စိတ်တွေ ကြွထ လာပြီ . .။ဒီအချိန်မှာ ဈန်ရ သည် အပြင် ဧည့်ခန်း မှာ အနှိပ်ခန်း တာဝန်ခံ မန်နေဂျာမ နဲ့ ထိုင်ပြီး စကားတွတ်ထိုးနေ သည် ။ မန်နေဂျာမ က အသက် ၃၀ခန့် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး..တောင့်တင်းစိုပြေ သည် ..။ တရုပ်ကပြားမ လို့ ဈန်ရထင်တာဘဲ ..။ နံမည် က လူ နဲ့ လိုက် သည် ..။ ၀င်းဝင်းဝါ….တဲ့ ..။၀င်းဝင်းဝါ က သူမ သည် အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ အပျို ဆိုတာကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ဈန်ရသိအောင် ပြော သည် ။ ဈန်ရ နဲ့ ခင်မင်သွား သည် ..။ ဈန်ရ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ချင်း ဖလှယ်ကြသည် အထိ ဖြစ်လာ သည် ..။ သီဟ သဘောကျသွားတဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းလဲ ပြောပြ သည် ..။ အဲဒီကောင်မလေး က ခုမှ စနှိပ်တာ တဲ့ ..။ အသစ်ကလေး ပေါ့ ..။ မိဘတွေ က မကျန်းမာလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့ အလုပ်ထွက်လုပ်ရတာ..တဲ့ ..။ နံမည် က“ ကြွေမ ”…တဲ့ ..။ ဈန်ရ ၀င်းဝင်းဝါ နဲ့ စကားကောင်းနေတုံး ဖုန်းလာ သည် ..။အို ..အမရာ့ဆီက ..။
“ ဟလို ဈန်ရ ပါ ..”
“ ကိုဈန်ရ..မီးငယ် ပါ …. ညတုံးက ပါတီ မှာ ကိုဈန်ရ ကို မီးငယ် ရှာသေးတယ် ..မတွေ့တော့ဘူး..တယောက်ယောက် တခုခု လုပ်ခိုင်းလား ..”
“ ဟုတ်တယ်..မီးငယ် ..”
ဈန်ရ အန်တီလေး အိမ်မှာ လိုက်အိပ်ပေးတာကို ပြောဖို့ ၀န်လေး နေ သည် ..။
“ ကိုဈန်ရ ..မီးငယ်ကို စကားမပြောချင်ဘူးလား..မေးတခွန်း ဖြေတခွန်း နဲ့ ..”
“ ပြောချင်ပါတယ် ..မီးငယ် အခု အိမ်မှာဘဲ လား ..”
“ ဟုတ်တယ် ..ကိုဈန်ရကော ဘယ်တော့အားလဲ..အခု အားလား ..”
“ အခုတော့ မအားသေးဘူး ..သီဟ နဲ့ တနေရာ ရောက်နေလို့..”
“ မီးငယ် နဲ့ ဘယ်တော့ ထပ်တွေ့မှာလဲ..”
“ မီးငယ် လုပ်စရာ ရှိရင် ပြောလေ..ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..”
“ လုပ်ပေးရမှာကတော့..မီးငယ် ဘေးနားမှာ ကိုဈန်ရ နေပေးဖို့ဘဲ..ဟင်းဟင်း….ဟင်း…”
ဈန်ရ လဲ မီးငယ် နဲ့အတူလိုက်ရယ် သည် ..။
“ မီးငယ် …. ”
“ မွေးနေ့လက်ဆောင် ကြိုက်လား လေးဘာလေးတောင် မမေးတော့ဘူးလား …”
“ မီးငယ်ကြိုက်တယ် …စဉ်းစားနေတာ…ကိုဈန်ရ အကြောင်း ..”
ဈန်ရ ဘာပြော၇မှန်း မသိ ..။အကယ်လို့သာ ညက အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် နဲ့ သာ မဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဈန်ရ သည် အမရာ နဲ့
ဒီထက် စကားတွေ ပြောဖြစ်မယ် ထင်သည် ..။ အခုဟာက သူ အမရာ့ရှေ့မှာ စိတ်မလုံဘူး ဖြစ်နေရ သည် ။
“ မီးငယ်ကိုရော ကိုဈန်ရ သတိရနေလား ..သတိရရဲ့ လား ..”
“ ရတယ်..ရတာပေါ့ …”
“ဟုတ်ပြီလေ..လူချင်းတွေကတော့မှဘဲ စကားပြောတော့မယ် ..ကိုဈန်ရ က မပြောချင်သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့..”
“ မဟုတ်ပါဘူး..ပြောချင်ပါတယ် ..”
“ အိုကေ..အိမ်လာရင် လဲ မီးငယ် နဲ့ တွေ့အုံးနော် ..”
“ ဟုတ်ပြီ..မီးငယ် …”
“ ဒါဆို ..ဘိုင်းနော် ..ဆီးယူး ဆွန်း ..”
အမရာ ဖုန်းချသွားတော့ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ၀င်းဝင်းဝါ က ပြုံးစိစိ နဲ့..“ သူ့ရီးစား လား ..”လို့ မေး သည် ..။
“ မဟုတ်ဘူး..ညီမ..ညီမ …. ” လို့ ဈန်ရ ဖြေ သည် ..။
အခန်းထဲမှာတော့..သီဟ သည် “ ကြွေမ ” တကိုယ်လုံး အနှံ့ နှိပ်ပေးနေ သည် ..။
“ကြွေမ ” ရဲ့ ညည်းသံ သဲ့သဲ့ ကို ကြားနေရ သည် ..။
ဈန်ရ ၀င်းဝင်းဝါတို့ အနှိပ်ခန်းက အပြန် သီဟ “ကြွေမ ” ဆိုတဲ့ကောင်မလေး ကို “ကြွေ ” တဲ့ အကြောင်းနားငြီးလောက်အောင်ဘဲ..ကြားရတော့တာဘဲ..။ကားမောင်းနေရင်း..ဖုန်းလာလို့..ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်..ခေါ်တာ။
“ ဈန် ..ဘယ်မှာလဲ ..”
“သီဟ နဲ့ အလုပ်ကိစ္စတခု လုပ်ပြီး ပြန်လာနေတယ်…အန်တီလေး ..”
“ ဒီည ရော လာအိပ်မှာ မဟုတ်လား ..”
“ ဟုတ်..လာအိပ်ပေးမယ်..အန်တီလေး …”
“ ဟုတ်ပြီလေ…တွေ့မယ်နော် ..ဈန် ..ဒါဘဲ..”
သီဟ က “ အန်တီလေး က သူ့အိမ်လာဖို့ ပြောနေတာလား ..” လို့ မေးသည် ..။
“ဟုတ်တယ် ..ဒါ နဲ့ မင်း..“ ကြွေမ ” နဲ့ ထပ် ချိန်းထားသေးလား ..”
“ အင်း ..ချိန်းထားတယ် …နှိပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ..သူ့ရွာ လိုက်သွားမလို့ …”
“ ဟား ..တယ် လုပ်လိုက်ပါလား ..သီဟတို့ကတော့..”
“ အင်း ..ကြွေမ ဘ၀ က မလှမပဘူး…နဲနဲ မစမလို့ …”
“ စောင်ကို မပြီး ကြည့်ရှုတော့မှာ လား ..”
“ မနောက်နဲ့ကွာ..တကယ် သနားတာ…ကြွေမရွာ ကို လိုက်သွားမယ် ..အိမ်ဆိုင်လေးတခု တည်ပေးမလို့..ဈန်ရ..မင်း ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့အုံးနော် …”
“ အေးပါ ..သူ့မှာ မောင်လေးတွေ ဘာတွေ ရော ရှိတယ်တဲ့ လား ..”
“ ဟာ..ဘာလဲကွ..မင်းဟာက ..”
“ ဟားဟား…တော်ကြာ သူ့မောင်တွေ က သိုင်းသမားတွေ ဖြစ်နေလို့ ဖိုက်တာ ခံနေရအုံးမယ် ..”
ဦးထွန်းချုပ် သည် အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်ထိုင်ပြီး စာအုပ်တအုပ် ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ နဲ့ ဖတ်နေ သည် ..။ဒေါ်မဒီချုပ် ကတော့ တော်တော်လှမ်းလှမ်း မှာ ရှိနေသော စားပွဲပေါ်က ကွန်ပြူတာ မှာ အလုပ်များနေ သည် ..။သူမ သည် စားပွဲပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ၀ိုင်ခွက်ကို ယူသောက်လိုက်..စာရိုက်လိုက် လုပ်နေရာက “ ကိုကြီး ..” လို့ လှမ်းခေါ်လိုက် သည် ..။ ဦးထွန်းချုပ် က မော့ကြည့် သည် ..။
“ မဒီ့ကို ဇက်ကျောလေး ဆွဲပေးမလားဟင် ..အရမ်းညောင်းလွန်းလို့ ..”
ဦးထွန်းချုပ် လဲ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို ကုတင်ပေါ်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်မဒီချုပ် ဆီကို လျောက်လာ သည် ..။ သူမထိုင်နေတဲ့ အနောက်ကနေ ပုခုံး နဲ့ ဇက်ပိုး ကို သူ့လက်နှစ်ဘက် နဲ့ ခပ်ဖွဖွလေး နှိပ်ပေး သည် ..။
“ ကိုကြီး..နဲနဲ ပြင်းပြင်းလေး ..”
ဦးထွန်းချုပ် သည် ဒေါ်မဒီချုပ် ကွန်ပြူတာမှာ ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ ကြည့်လိုက် သည် ..။ဖေ့စ်ဘွတ် နဲ့ အလုပ်များနေတာကိုး ..။ ဒေါ်မဒီချုပ် ရဲ့ ညီမ ၀တီ ရဲ့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း သဲသောင်ပြင်မှာနှစ်လွှာ ဘီကီနီ ရေကူးဝတ်စုံလေး နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ ၀တီ သည် ဒေါ်မဒီချုပ်ထက် လေးနှစ်လောက်ငယ် သည် ..။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် မှာ နေ သည်။
“ ကိုကြီး..၀တီ ကိုယ်လုံး မလှဘူးလား ..ကြည့်ပါအုံး …”
“ အင်း..လှတယ်..မဒီ့ကိုတော့ မမှီဘူးထင်တယ် ..ဟဲဟဲ …”
“ အံမယ် ..ကိုကြီး က မြှောက်နေပြန်ပြီ ..တခုခု လိုချင်ပုံ ရတယ် …”
၀တီ ရဲ့ အချိုးကျတဲ့ ကိုယ်လုံးတွေ ကို မြင်ရတာနဲ့ ဦးထွန်းချုပ် စိတ်တွေ နိုးကြားထကြွလာရ သည် ..။ သူ့ဇနီးမဒီ လဲ ၀တီလိုဘဲ တောင့်တင်း တာပါဘဲ ..။ ရင်တွေက ဆူဖြိုးတင်းမာဆဲ..ခါးသေးသေး အောက် က တင်တွေကု ၀ိုင်းကား နေ သည် ..။ ဦးထွန်းချုပ် က ပုခုံးသားတွေကို နှိပ်ပေးရင်း..ဒေါ်မဒီချုပ်ရဲ့ ရင်ဘတ် ဆီကို လက်များက ဆင်းလာ သည်။
ဦးထွန်းချုပ် က တဟဲဟဲ ရယ်လိုက် သည် ..။ဒေါ်မဒီချုပ် ရဲ့ ဖွံ့ထွားတင်းမာဆဲ ရင်သားတွေ ကို ဖွဖွလေး ပွတ်နေ သည် ..။ နို့သီးတွေကို သူ့လက်ညှိုး နဲ့ လက်မ ကိုသုံးပြီး ချေနယ်ပေးနေ သည် ..။ ဒေါ်မဒီချုပ် လဲ တအင်အင် နဲ့ ကာမဖီလင်တွေ တက်လာပြီ။
“ ကိုကြီး..ခဏ..ရေချိုးခန်း ၀င်လိုက်အုံးမယ် …”
ဒေါ်မဒီချုပ် ထရပ်လိုက် သည် ..။ ဦးထွန်းချုပ် က သူမကို မလွှတ်ချင်လွှတ်ချင် နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ရ သည် ..။ရေချိုးခန်း ဆီကို တလှမ်းချင်း လျောက်သွားသော သူမ ရဲ့ အနောက်ပိုင်း အလှအပတွေ ကို ဦးထွန်းချုပ် တပ်မက်စွာနဲ့ စိုက်ကြည့်နေ သည် ..။ သူ့ လိင်တန် က ပုဆိုးကြား က ငေါငေါကြီး ထနေပြီ ..။ဒေါ်မဒီချုပ် ရေချိုးခန်း က ပြန်အထွက် ..ဦးထွန်းချုပ် ကို မတွေ့လို့ ကိုကြီး..ဘယ်ရောက်သွားလဲ…လို့ မေးဆဲအနောက်ဖက်ကနေ ဦးထွန်းချုပ် ရုတ်တရက် ပေါ်လာပြီး သိမ်းဖက်လိုက်တာ ခံလိုက်ရလေ သည်။
“ အို့..အမလေး..လန့်လိုက်တာ . ….”
ဦးထွန်းချုပ် ရဲ့ လက်တွေက သူမ ရင်သားတွေကို ဆုတ်နယ် ဖျစ်ညှစ်နေကြသည် ..။“ကိုကြီး..ကဲလိုက်တာ..ဘာဖြစ်တာလဲ..ဘိုင်ယာဂရာများ သောက်ထားလား..ဟယ်..သူ့ဟာကြီးကလဲ မာတောင်လို့”ဦးထွန်းချုပ် ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်အစားတွေ မရှိတော့ ..။ လိင်တန်ညိုညိုကြီး က ကြီးထွား တောင်မတ်နေ သည် ..။ ဒေါ်မဒီချုပ် က တခစ်ခစ်ရယ်လိုက်ပြီး..သူမ ၀တ်ထားတဲ့ အနက်ရောင် ဇာနားကွပ် ည၀တ် ၀တ်ရုံ ကို ချွတ်ပစ်လိုက် တော့ သူမ လဲ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွား သည် ..။ ဦးထွန်းချုပ် သည် ဖြူဝင်းစွင့်ကားသော တင်သားကြီးတွေကို အနောက်ဘက် က ဖက်ထားစဉ် သူ့လိင်တန်ကြီး နဲ့ ဖိကပ်ထောက်ထားရင်း ..ကော့ကာကော့ကာထိုးပွတ်နေ သည် ..။ ဒေါ်မဒီချုပ် လဲ..“ စုတ်ပေးရမလား ..” လို့ မေး သည် ..။
“အင်း ..မဒီ့ လျာကစားတာလေး မရတာကြာပြီ.. .”
ဒေါ်မဒီ လဲ ဦးထွန်းချုပ်ရှေ့မှာ ဒူးလေးတုပ်ပြီး ..လိင်တန်ညိုညိုကြီးကို အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး စုတ်လေ သည်။သူမလျာလေး က ဒစ်ကားကားကြီးကြားကို ထိုးထိုးဆွ ကစားပေးလိုက်တော့ ဦးထွန်းချုပ် တထွန့်ထွန့်လူး သွားရ သည် ..။
“ အို..အား…ဟား….ဟား ….. မဒီရယ် ..ကောင်းလှချည် လား . . .”
ဒေါ်မဒီ သည် လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်ဖျားကနေ အရင်းအထိ လျာနဲ့ တပြတ်ပြတ် လိုက်ယက်ပေးနေပြန် သည် ..။
“အိုး…ဟား …ကောင်း..ကောင်းတယ် …အို့..အဲဒါလေး..အဲဒါလေး..ထိတယ် …အာပါးပါး …”
ဦးထွန်းချုပ် ရေရေလည်လည် ကြိုက်သွား သည် ..။မျက်လုံးမှိတ်…ခါးကော့ပြီး ဒေါ်မဒီချုပ် စုတ်ပေးတာကို ကျေနပ်နေ သည်။ဒေါ်မဒီချုပ် လဲ အသက်ရလာပြီး တခါတရံမှသာ ထောင်နိုင်သော ခင်ပွန်းသည် ကို အားရပါးရ စုတ်ပေးနေ သည် ..။ သူမ လျာနဲ့ ကလိပေးတာ ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ဦးထွန်းချုပ် တအား ကောင်းလာ သည်။
← ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၅)
ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၇) →